Tarsan oo Dacwad Ka Gudbiyay Axmed Madoobe. — FAAFIYE.COM
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan), uu dacwad ka dhan ah Madaxweynaha Jubba-land axmed Madoobe u gudbiyay Kenya,islamarkaana uu kusoo rogay xayiraad dhanka socdaalka ah.
Tarsan ayaa Kenya u qoray qoraal uu ku waydiinayo sodaalka Axmed madoobe ku joogo Gobolada Kenya oo aysan Safarada Soomaliya Ee Kenya waxba kala socon.
Kenya oo ka jawaabaysa qoraalka safiirka ayaa marka hore raali galin ka bixisay sida wararka sheegayaan safarka Axmed Madoobe ee aysan Safarada soomaliya ee dalka Kenya waxba ka ogayn socdaalkiisa waxayna Dowladda Kenya ku amartay Hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe inuusan Socdaal ku dhex mari Karin dalka Kenya gudahiisa.
Arintaan ayaa imaanaysa Xili Axmed Maxamed islaam (Axmed Madoobe), uu safar qarsoodi ahaa ku tagay Todobaadkii aynu soo dhaafnay Magaaladda Gaarisa ee Gobolka Woqooyi Bari dalka Kenya,wuxuuna halkaas kula kulmay Madaxda Soomaalida.
Dowladda Dhexe ee ayaa Madax Goboleedyadda Soomaaliya kasoo xirtay Safaradii ay ku tagi jireen qaar kamid ah wadamada dariska,waxaana mudooyinkii dambe yaraaday Madaxweynayaal Maamul Goboleed oo la kulmaya Madaxweyne dal.
Dowlada oo Sheegtay in La Qabtay Madaxii Hogaaminayay Qaraxyadii Muqdisho.